Xuska - www.yomelijah.com
Dabaaldegga xusuusta dhimashada Ciise Masiix
"Waayo, Masiixa ah Kormariddeenna waa la sadqeeyey"
(1 Korintos 5:7)
Fadlan dhagsii isku xirka si aad u aragto dulucda maqaalka
Taariikhda xuska dhimashada Ciise Masiix waxay noqon doontaa Talaado Abriil 12, 2022, ka dib qorrax dhaca
Sidee taariikhdan loo xisaabiyaa?
Waxaad ka daawan kartaa sharaxaad faahfaahsan xagga hoose ee luqadaha hoose:
"Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya"
Si taxaddar leh oo loo akhriyo Yooxanaa 10:1-16 waxay muujinaysaa in dulucdu tahay aqoonsiga Masiixa inuu yahay adhijirka runta ah xertiisa, idaha.
Yooxanaa 10:1 iyo Yooxanaa 10:16 waxaa ku qoran, "Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii aan xerada idaha illinka ka soo gelin ee meel kale ka soo fuulaa, kaasi waa tuug iyo waxdhace. (...) Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya". Tani "xerada idaha" waxay ka dhigan tahay dhulkii Ciise Masiix ku wacdiyey, Qaranka Israa'iil, ee macnaha guud ee sharciga Muuse: "Laba-iyo-tobankan Ciise ayaa diray oo amray isagoo leh, Jid ka mid ah jidadka dadka aan Yuhuudda ahayn ha marina, magaalo ka mid ah magaalooyinka reer Samaariyana ha gelina, laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga Israa'iil ah" (Matayos 10:5,6). "Laakiin wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, La iima soo dirin, idaha lunsan oo reer binu Israa'iil maahee" (Matayos 15:24). Xerada idaha sidoo kale waa "guriga Israa'iil".
Yooxanaa 10:1-6 waxaa ku qoran in Ciise Masiix uu ka soo muuqday albaabka "Xerada idaha" hortiisa. Tani waxay dhacday markii la baabtiisay. "Ilaaliyaha" wuxuu ahaa Yooxanaa Baabtiisaha (Matayos 3:13). Markii baabtiiskii Ciise, oo noqday Masiixa, Yooxanaa Baabtiisaha ayaa albaabka u furay oo ka marag furay inuu Ciise yahay Masiixa iyo Wanka Ilaah: "Maalintii labaad Yooxanaa wuxuu arkay Ciise oo ku soo socda, oo wuxuu yidhi, Bal eega Wanka Ilaah ee dembiga dunida qaadaya" (Yooxanaa 1:29-36).
Yooxanaa 10:7-15, isagoo ku sii socda isla mowduuca Masiixa, Ciise Masiix wuxuu adeegsaday tusaale kale isagoo isu tilmaamaya inuu yahay "Albaabka", meesha keliya ee laga geli karo si la mid ah Yooxanaa 14:6: "Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee". Mawduuca ugu muhiimsan ee mawduuca had iyo jeer waa Ciise Masiix sida Masiixa. Laga soo bilaabo aayadda 9, ee isla tuducdii (wuxuu beddelayaa tusaalaha mar kale), wuxuu isu magacaabay adhijirka daajiya idihiisa. Waxbarashadu waxay ku salaysan tahay isaga iyo habka uu u daryeelo idihiisa. Ciise Masiix wuxuu isu magacaabay inuu yahay adhijirka ugu wanaagsan oo naftiisa u bixin doona xertiisa oo jecel idihiisa (adhijirka mushaharka qaata ee aan naftiisa halis u gelin doonin idaha aan isaga lahayn). Mar kale diiradda waxbaridda Masiixu waa sida adhijir naftiisa u huri doona idihiisa (Matayos 20:28).
Yooxanaa 10:16-18: "Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya. Sidaas daraaddeed Aabbuhu waa i jecel yahay, waayo, naftaydaan bixiyaa inaan mar kale qaato. Ninna igama qaado, laakiin anaa iska bixiya. Waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo, waanan leeyahay amar aan haddana ku soo qaato. Amarkan waxaan ka helay Aabbahay".
Markaad akhrido aayadahan, adigoo tixgelinaya macnaha guud ee aayadaha hore, Ciise Masiix wuxuu wakhtigaas ku dhawaaqay fikrad cusub, kaas oo ah inuu naftiisa u huro ma aha oo kaliya inuu u hiiliyo xertiisa Yuhuudda ah, laakiin sidoo kale wuxuu u hiilinayaa kuwa aan Yuhuudda ahayn. Xaqiiqdu waxay tahay, amarkii ugu dambeeyay ee uu xertiisa ku siiyey, ee ku saabsan wacdinta, waa kan: "Laakiinse waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan Yeruusaalem, iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya, iyo meesha dunida ugu fog" (Falimaha Rasuullada 1:8). Isla wakhtiga baabtiiskii Korneeliyos ayaa ereyadii Masiixa ee ku sugan Yooxanaa 10:16 bilaabi doona inay rumoobaan (eeg xisaabta taariikhda Falimaha Rasuullada 10).
Haddaba, “Idaha kale” ee Yooxanaa 10:16 waxay khuseeyaan Masiixiyiinta aan Yuhuudda ahayn. Sida ku jirta Yooxanaa 10:16-18 , waxay qeexaysaa midnimada idaha ee addeecida Masiixa. Waxa kale oo uu kaga hadlay xertiisii ​​wakhtigiisii ​​inay ahaayeen “idoyahow yari”: “Ha baqina, idoyahow yari, waayo, Aabbihiin waxaa ka farxiya inuu boqortooyada idin siiyo” ( Luukos 12:32). Bentakostiga sanadka 33, xertii masiixu waxay tirsadeen 120 kaliya (Falimaha Rasuullada 1:15). Waxaynu akhrin karnaa in tiradoodu ay kor u kici doonto dhawr kun (Falimaha Rasuullada 2:41 (3000 oo naf); Falimaha Rasuullada 4:4 (5000)). Masiixiyiinta cusub, labadaba waagii Masiixa iyo kuwii rasuulladiiba, waxay u taagnaayeen "adhi yar" marka loo eego tirada guud ee dadka reer binu Israa'iil iyo ka dib dhammaan quruumaha kale, waagaas.
Aan midowno siduu Ciise Masiix u weydiiyey Aabihii
"Kuwan oo keliya kuu baryi maayo, waxaanse weliba kuu baryayaa kuwa igu rumaysanaya hadalkooda aawadiis, inay dhammaan mid ahaadaan, sidaad adigu, Aabbow, iigu jirtid, aniguna aan kuugu jiro, inay iyaguna inoogu jiraan, in dunidu rumaysato inaad i soo dirtay" (Yooxanaa 17:20,21).
- Lidda Kormaridda waa tilmaantii shuruudaha Ilaah ee Dabaaldegga xusuusta dhimashada Ciise Masiix: "kuwaas oo ah hooska waxyaalaha iman doona, laakiinse jidhka waxaa iska leh Masiixa" (Kolosay 2:17). "Waayo, sharcigu wuxuu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan oo iman doona, laakiin ma leh suuradda waxyaalahaas qudheeda" (Cibraaniyada 10: 1).
- Kaliya kuwa gudniinku waxay u dabaaldagi karaan Kormarista: "Oo haddii mid qariib ahu idinla dego, oo uu doonayo inuu Rabbiga u dhawro iidda Kormaridda, de waa in intiisa lab oo dhan la wada gudaa, oo markaas ha soo dhowaado oo ha dhawro, oo markaas wuxuu noqon doonaa sidii mid dalka ku dhashay; laakiinse qof buuryoqab ahu waa inuusan wax ka cunin" (Baxniintii 12:48).
- Masiixiyiintu kuma waajibaan gudniinka jirka. Uu gudniinka yahay ruuxa: "Haddaba sida jidhka loo gudo isaga jara xumaanta qalbigiinna, oo mar dambe ha sii madax adkaanina" (Sharciga Kunoqoshadiisa 10:16; Falimaha Rasuullada 15: 19,20,28,29 "Xukunka Rasuullada", Rooma 10: 4 "Masiix yahay dhammaadka sharciga "(la siiyo Muuse)).
- "Gudniinka ruuxa" ah ee wadnaha ka dhigan tahay addeecidda idiin kaxaysa xagga Ilaah iyo Wiilkiisa Ciise Masiix: "Waayo, hubaal gudniintu wax bay tartaa, haddaad sharciga yeeshid, laakiin haddaad sharciga gudubtid, gudniintaadii waxay noqotay buuryoqabnimo. Haddaba haddii mid buuryoqab ahu xajiyo qaynuunnada sharciga, buuryoqabnimadiisii miyaan loo tirin doonin sida gudniin? Oo kan jinsigiisu buuryoqab yahay, hadduu sharciga dhammeeyo, miyuusan ku xukumi doonin kaaga sharciga gudba, in kastoo aad haysatid qorniinka iyo gudniinta? Waayo, kii dadka sida Yuhuudi ugu muuqdaa, Yuhuudi ma aha; gudniinta jidhka ka muuqataana, gudniin ma aha; laakiin waxaa Yuhuudi ah kii hoosta Yuhuudi ka ah; gudniintuna waa tan qalbiga, ee ku jirta ruuxa, oo aan ku jirin qorniinka; kaas ammaantiisu kama timaado dadka, waxayse ka timaadaa Ilaah" (Rooma 2:25-29).
- Ha haysan "Gudniinka ruuxa", waa caasinnimada xagga Ilaah iyo Wiilkiisa Ciise Masiix: "Idinkan madaxa adag oo aan qalbiga iyo dhegaha laga gudinow, weligiinba Ruuxa Quduuska ah waad hor joogsataan. Sidii awowayaashiin yeeli jireen oo kale ayaad idinna yeeshaan. Bal nebiyada kee baan awowayaashiin silcin? Xataa iyagu waxay dileen kuwii hore u sheegay imaatinka Kan xaqa ah; kan idinku aad haatan gacangeliseen oo disheen. Waxaad sharciga u hesheen sidii wax malaa'igahu hagaajiyeen, laakiinse ma aydnaan xajin'' (Falimaha Rasuullada 7: 51-53).
- Gudniinka ruuxa ee wadnaha ayaa baahan yahay ka Dabaaldegga xusuusta dhimashada Ciise Masiix (iyada oo aan loo eegin rajada Masiixiga (jannada ama dhulka)): "Nin kastaa ha is-imtixaamo, oo sidaas kibista wax ha uga cuno, oo koobka ha uga cabbo" (1 Korintos 11:28).
- Masiixiyiintu waa inay sameeyaan baaritaanka damiirka inta aanay ka qayb galin Dabaaldegga xusuusta dhimashada Ciise Masiix. Haddii uu arko in uu leeyahay qalbi daahir ah Ilaah hortiisa, waxa uu leeyahay gudniinka "gudniinka ruuxa ah, markaas waa inuu ka qaybqaadan Dabaaldegga xusuusta dhimashada Ciise Masiix (iyada oo aan loo eegin rajada Masiixiga (jannada ama dhulka)).
- Amarka amar ee Masiixa, inuu cuno cunnida "jidhka" iyo "dhiiggiisa", waa martiqaad ah dhammaan Masiixiyiinta rumaysadka leh inay cunaan "kibis aan khamiir lahayn", oo ka dhigan "jidhka" iyo cabitaanka Koobka, isagoo matalaya "dhiigiisa": "Anigu waxaan ahay kibista nolosha. Awowayaashiin waxay cidlada ku cuneen maannada, oo ay dhinteen. Tanu waa kibistii samada ka soo degtay, in qof kasta cuno oo uusan dhiman. Anigu waxaan ahay kibista nool ee samada ka soo degtay. Haddii qof uun kibistan cuno, weligiis wuu noolaan doonaa. Oo kibistaan siin doonaa waa jidhkayga, nolosha dunida aawadeed. Sidaa aawadeed Yuhuuddu way isla murmeen iyagoo leh, Kanu sidee buu jidhkiisa inoo siin karaa inaannu cunno? Ciise haddaba wuxuu ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Haddaydnan jidhkii Wiilka Aadanaha cunin oo dhiiggiisa cabbin nolosha kuma lihidin gudihiinna. Oo kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah, oo maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa. Waayo, runtii jidhkaygu waa cunto, dhiiggayguna runtii waa wax la cabbo. Kii jidhkayga cuna oo dhiiggayga cabba wuu igu jiraa, anna waan ku jiraa isaga. Sida Aabbaha nool ii soo diray, aniguna Aabbahaan u noolahay daraaddiis, sidaasaa kii i cunaa isaguna u nolaan doonaa daraadday. Tanu waa kibista samada ka soo degtay, ma aha sida tii awowayaashiin cuneen oo ay dhinteen. Kii kibistan cunaa, weligiis wuu noolaan doonaa" (Yooxanaa 6:48-58).
- Sidaa darteed, dhammaan Masiixiyiinta runta ah, wax kasta oo ay rajadooda, jannada ama dhulka, waa inay ka qaataan rootiga iyo khamriga Dabaaldegga xusuusta dhimashada Ciise Masiix, waa amar: "Ciise haddaba wuxuu ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Haddaydnan jidhkii Wiilka Aadanaha cunin oo dhiiggiisa cabbin nolosha kuma lihidin gudihiinna. (...) Sida Aabbaha nool ii soo diray, aniguna Aabbahaan u noolahay daraaddiis, sidaasaa kii i cunaa isaguna u nolaan doonaa daraadday" (Yooxanaa 6:53,57).
- Xusuusinta dhimashada Masiixa waa in lagu dabaaldegaa oo kaliya kuwa raacsan ee Masiixa: "Taa aawadeed, walaalahayow, markaad isugu timaadaan inaad wax cuntaan, isa suga" (1 Korintos 11:33).
Haddii aad rabto inaad ka qayb gasho "xusuusinta dhimashada Masiixa", ma tihid Masiixiyiin, waa inaad "la baabtiisaa", si daacad ah u doonaya inaad addeecdo amarrada Masiixa: "Tag oo samee xertii dadka Ilaah. oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuskaa, oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal eega, maalintii oo dhan waan idinla joogayaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado. dhammaystirka nidaamka waxyaalaha" (Matayos 28: 19,20).
Sidee loo dabaaldegaa xusuusta dhimashada Ciise Masiix?
"Waxan xusuustayda u sameeya"
Ka dib xaflada Kormarista, Ciise Masiix wuxuu qaabeeyay qaabka loogu dabaaldegayo mustaqbalka xusuusta dhimashadiisa (Lukos 22: 12-18). Waxay ku jiraan marinka kitaabiga ah, Injiillada:
Matayos 26: 17-35.
Markos 14: 12-31.
Luukos 22: 7-38.
Yooxanaa cutubka 13 ilaa 17.
Yuudas Iskariyod ayaa ka tagay xafladda ka hor. Tani waxay muujinaysaa in xaflad this waa in la dabaal kaliya mid ah dadka Masiixiyiinta aamin (Matayos 26: 20-25; Markos 14: 17-21; Yooxanaa 13: 21-30; 1 Korintos 11: 28,33)).
Munaasabadda xuska waxaa agu sharraxay si fudud: "Sidii ay u sii cunayeen, Ciise ayaa kibis qaaday oo, ka dib markii isagoo leh barako, ayuu kala jejebiyey oo, waxay xertiisii ​​siiyey, ayuu yiri: "Oo intay wax cunayeen, Ciise ayaa kibis qaaday oo barakeeyey, wuuna jejebiyey oo xertii siiyey oo yidhi, Qaata oo cuna. Tanu waa jidhkaygiiye. Kolkaasuu koobkii qaaday oo mahadnaqay oo siiyey iyaga, oo wuxuu ku yidhi, Kulligiin ka cabba. Waayo, kanu waa dhiiggayga axdiga cusub kan kuwo badan loo daadshay dembidhaafkooda aawadiis. Laakiin waxaan idinku leeyahay, Hadda dabadeed anigu kama cabbi doono midhahan geedka canabka ah ilaa maalinta aan iyadoo cusub idinkula cabbayo boqortooyada Aabbahay dhexdeed. Goortay gabay ammaan ah ku gabyeen waxay u baxeen Buur Saytuun" (Matayos 26:26-30). Masiix sharaxay sababta xaflad this, macnaha allabarigiisa, oo ka wakiil kibis aan khamiir lahayn, calaamad jidhkiisa aan dembi lahayn oo koobka, koobka khamriga calaamad u ah in uu dhiig. Waxa uu xertiisa ka codsaday in uu xusuusiyo dhimashadiisa sanad walba 14 Nisan (Jadwalka Yuhuudda) (Luukos 22:19).
Injiilka Yooxanaa ayaa inoo sheegayaa waxbarida Masiixa ka dib xafladda, laga yaabee Yooxanaa 13:31 ilaa Yooxanaa 16:30. Ciise baryay Aabbihiis, in John cutubka 17. Matthew 26:30, inoo sheegayaa: "Goortay gabay ammaan ah ku gabyeen waxay u baxeen Buur Saytuun". Waxay u badan tahay in heesta ay tahay ka dib markii salaadda Ciise Masiix.
Waa inaynu raacnaa tusaalaha Masiixa. Munaasabadda waa in ay abaabulaan hal qof, waayeel, wadaad, wadaad ah kaniisadda masiixiga. Haddii munaasabada lagu qabto qoyska, waa madaxa qoyska Christian oo ah inuu u dabaaldego. Oo aan nin, haweeney Masiixi ah oo qabanqaabinaysa xafladda waa in laga doorto dumarka da'da ah (Titus 2: 3). Xaaladdan oo kale, haweenku waa inay daboolaan madaxa (1 Korintos 11: 2-6).
Qofkii abaabulaya xafladda ayaa go'aan ka gaari doona waxbarista xaaladdan iyada oo lagu saleynayo sheekada Injiilka, laga yaabee iyaga oo akhriya iyaga oo ka faalloodaya. Salaadda kama dambaysta ah ee loogu talagalay Jehovah Ilaah ah ayaa la sheegi doonaa. Mahad waxaa laga yaabaa in lagu heeso in ay Jehovah iyo sharafba Wiilkiisa Ciise Masiix.
Kibis waa aan khamiir lahayn (Sida loo sameeyo kibis aan khamiir lahayn (video si ay u diyaariyaan)). Wixii khamri ah, waddamada qaarkood waxaa laga yaabaa inay adagtahay in la helo hal. Kiiskan gaarka ah, waa hoggaamiyeyaasha go'aaminaya sida loogu beddelo habka ugu haboon ee ku saleeysan Kitaabka (Yooxanaa 19:34). Ciise Masiix ayaa tusay in xaaladaha qaarkood ee gaarka ah, go'aamo gaar ah loo samayn karo iyo in naxariista Ilaah ay ku dabaqi doonto xaaladdan (Matayos 12: 1-8).
Ma jiraan wax macluumaad ah oo ku saabsan Kitaabka Qudduuska ah oo ku saabsan mudada saxda ah ee xafladda. Sidaa darteed, waa kan qabanqaabiya dhacdadaas oo muujin doonta xukun wanaagsan. dhibic kaliya ee muhiim kitaabiga ah ee ku saabsan waqtiga xafladda waa kuwa soo socda: xasuusta dhimashada Ciise Masiix waa in loo dabaal "inta u dhaxaysa laba habeen": Ka dib qorrax dhaca 13/14 "Niisaan", iyo ka hor qorraxda (before sunrise). Yooxanaa 13: 30 waxay inoo sheegaysaa in markii Yuudas Iskariyod uu ka tagay, ka hor xafladda, "oo waxayna ahayd habeennimo" (Baxniintii 12: 6).
Jehovah Ilaah ayaa sharcigiisii ​​u dhigay: "oo waa inaan allabariga Iidda Kormaridda ilaa subaxda la gaadhsiin" (Baxniintii 34:25). Waa maxay sababta? Dhimashadii "Wanka Kormarista" waxay ahayd inay dhacdo "u dhaxaysa labada fiidka". Dhimashada Masiixu, Wanka Ilaah, ayaa lagu dhawaaqay in "xukun" sidoo kale "u dhaxaysa labada fiidka", iyo ka hor qorraxda: "Markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay isagoo leh, Wuu caytamay. Maxaynu markhaatiyaal weli ugu baahan nahay? Bal eega, haddeer waad maqasheen caytanka. Maxay idinla tahay? Way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen, Wuxuu istaahilaa dhimasho. (...) Kolkiiba diiqii baa ciyey. Markaasaa Butros wuxuu xusuustay hadalkii Ciise ku hadlay, Diiqu intaanu ciyin saddex goor ayaad i dafiri doontaa. Markaasuu baxay oo aad u ooyay" (Matayos 26: 65-75; Sabuurka 94:20 "wuxuu ka dhigayaa nasiib daro amar" , Yooxanaa 1: 29-36; Kolosay 2:17; Cibraaniyada 10: 1). Llaahay ha barakeeyo dadka Masiixiyiinta ah ee aaminka ah dunida oo dhan by yahay Wiilkiisa Ciise Masiix. Aamiin.